खेत खन्दा सुन र चाँदीका सिक्काले भरिएको माटोको भाँडो भेटियो ! – Khabar PatrikaNp
November 21, 2020 319
काठमाडौं । हामीले समय समयमा सुन्दै आएका छौँ कि माटोमा पैसा लगाउँदा बढ्दै जान्छ । तर रुखमा पैसा फल्दैन् । तर के हुन्छ जब माटोमा सुनचाँदी फेला पर्न थाल्छ । भारत, उत्तर प्रदेशको शामलीमा किसानले माटोले भरिएको ट्र्याक्टर ट्रलीले आफ्नो भाग्य खोल्यो ।वास्तवमा, त्यहाँ खन्दै गर्दा सुन र चाँदीका सिक्का बाहिर आउन थाले । यी सिक्का पुरानो समयका हुन् । गाउँलेहरूले सिक्का ट्र्याक्टरको ट्रेलबाट खसेपछि थाहा पाएका हुन् । खेतमा भएको सम्पतिका बारेमा जानकारी पाउने बित्तिकै ठूलो संख्यामा गाउँलेहरू त्यहाँ भेला भए ।
सबै जनाले सुनचाँदीका सिक्का लिएर गएको खुलेको छ । प्रहरी घटनास्थल पुगेपछि गाउँलेहरूले सिक्का लिएको कुरा अस्वीकार गरिरहेका थिए । तर आजतकको रिपोर्ट अनुसार तीन वटा सिक्काको फोटो लिइएको छ । यसमा दुई सुन र एउटा चाँदीका सिक्का छन् । रहमतुल्ला इब्ने मोहम्मद अरबीमा चाँदीको सिक्कामा र कलमा सुनको सिक्कामा लेखिएका छन् ।फार्मका मालिक ओम सिंहका अनुसार केही सिक्का बाहिर आए । यद्यपि उनीहरूले कति सुनको र कति चाँदीको हो भन्ने थाहा छैन । उही समयमा, गाउँ प्रमुखले त्यो सिक्का देखेको छैन भनेर बयान दिएका छन् ।
एडीएम अरविन्द सिंह भन्छन् कि उत्खननको क्रममा कुनै पनि धातु भेटिएको खबर आएको छ ।यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ । तर त्यहाँका गाउँले कै भाग्य चम्किएको बुझिएको छ । आजतकको स्थलगत रिपोर्टले दावी गरेको छ की त्यहाँ गाडधन भेटियो । किसानले बाहिर निकाले, त्यसपछि गाउँले भेला भए ।गाउँलेले सल्लाह गरे की यो राज्यलाई जानकारी दियो भने बेवारिसे सम्पत्ति राज्यको नै हुन्छ । यसैले सबै गाउँले मिलेर बाँडौ । र भेटिएको हैन भनौँ भन्ने सल्लाह भएको आजतकको दावी छ । तर अब यो विषयलाई प्रहरीले अनुशन्धान गर्ने भएको छ ।
Prevशनिबार जन्मिने ब्यक्तिको स्व्भाब कस्तो हुन्छ..? जान्नुहोस
Next५ रुपैयाँमा सादा र १० रुपैयामा मासु खाना खुवाउने राइ सबै सामु हात जोडेर रुदै मिडियामा आए
एका बिहानै कालिन्चोक् भगवतिको दर्शन गर्नुहोस शेयर् गरि आजको राशिफल हेर्नुहोस : वि.सं.२०७७ साल पौष २८ गते । मंगलबार । ईश्वी सन् २०२१ जनवरी १२ तारिख
“यु’द्ध हुनुको मुख्य कारणबारे छलफल नभई यु’द्धबिराम गर्न नसकिने” – तालिबान